Uyonwabile, iKhabhinethi yeRetro-Chic | 10 min ukuya eDowntown
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguBrittanni
UBrittanni unezimvo eziyi-60 zezinye iindawo.
Buyela emva kwaye uphumle kule ndawo inoxolo kunye nesitayile sokubuyela ePonderosa Park, ePrescott.
Le ndawo inayo yonke into! Ukuzola kwehlathi kunye nokuba lula kokuba kufutshane nedolophu esezantsi. Le ndawo ifakwe amagumbi amabini okulala kunye nebhafu enye. Inekhitshi eligcweleyo kuzo zonke iimfuno zakho zokupheka kunye negumbi lokuhlala elitofotofo lokukhaba umva kwaye ukonwabele imiboniso oyithandayo. Yonwabela ii-sips zakho zasekuseni ozithandayo kwi-patio ngelixa ujonge ehlathini, okanye ulale kwi-hammock phantsi kwemithi enomthunzi.
Indlu yonke yeyakho ukuba uyonwabele!
NGAPHAKATHI: Eli likhaya lebali elinye elineloft. Kukho umatrasi wenkosi kunye negumbi lokulala kwigumbi lokulala lokuqala. Igumbi lokulala lesibini likwindawo ephezulu kwaye lifuna ukusetyenziswa kweleli njengoko kubonwa kwiifoto.
Kukho ikhitshi eligcweleyo elinesitovu segesi esivuthayo kunye ne-oven combo kunye ne-microwave. Ikhitshi ligcwele ikofu yedriphu kunye noomatshini baseKureg. Isitovu sePellet kunye nezifudumezi zendawo ziya kukugcina upholile ngeenyanga zasebusika nangona sisebenzela ukufakela iiyunithi ezimbini ezincinci zeAC/zokufudumeza ngoDisemba ka-2021.
NGAPHANDLE: Thatha ukulala kwi-hammock yethu yangaphandle kwaye utye isidlo sasemini esimnandi kwitafile yepikiniki kwipatio.
KHANGELA-NGEN + PHUMA: Ukungena ku-2 pm kwaye uphume ngo-10 am.
I-PETS: Ngenxa yobume bokuba kwihlathi elivulekileyo kunye nemigangatho yokuqala yomthi oqinileyo asizivumeli izilwanyana zasekhaya ngeli xesha. Nangona sibathanda.
UKUTSHAYA: Eli likhaya elingatshaywayo kwaye akuvumelekanga ukutshaywa ngaphakathi.
UMOYA: Iinyanga zasebusika e-Prescott ziba bandayo. Kunokubakho ikhephu phakathi kukaDisemba ukuya kuMatshi. Iindlela zilungisiwe kwaye kwishedyuli yelori yokulima, nangona kunjalo, kuhlala kukhuthazwa ukuqhuba isithuthi se-4x4 xa kulindeleke ikhephu.
IPonderosa Park yindawo engummelwane eneendawo ezininzi zokuhamba intaba kunye neendlela zokuhamba kumgama wokuhamba wekhaya.
Downtown kukuhamba nje imizuzu elishumi ngokukhawuleza.
Ukufikelela ehlathini kumava angekho endleleni ngaphakathi kwemizuzu emi-5.
Umbuki zindwendwe ngu- Brittanni
Hi there! My husband and I are Phoenix natives who love outdoor adventure, good food and enjoying the great state of Arizona.
Ndifumaneka 24/7 ngefowuni, umbhalo okanye i-imeyile.